कानून ब्यवसायी इन्जिनियर सुन्दर नेपाली घर अभियानमा-NepalKanoon.com
इन्जिनियर/अधिवक्ता दिनेश चौधरी
एक कानून ब्यवसायी इन्जिनियर जो निर्माणमा लागेको समय संरचना निर्माण गर्ने पक्ष र तिको उक्त संरचनाको लगानीको सुरक्षको चिन्तामा काम गर्दछन त कहिले कानून ब्यवसायीका हैसियतमा निडरताको साथ विभिन्न रुपमा समाजमा अपाच्य र प्रणाली विपरितका कार्यलाई चुनौति दिदै अदालत र विभिन्न निकाय पुग्दछन ।
कुराकानीको सन्दर्भमा उनले वताए म काम छोड्न तयार छु तर म मैले पढेको र बुझेको भन्दा विपरित संरचना वनाउनेले नै गरौ भने पनि काम गर्दीन । उनले नेपाल स्थित अमेरिकन राजदुतावासमा एउटा भवन निर्माण समयमा एक सिनियर इज्निियरले गलत वनाएको रहेछ, पछि म सेत गएर हेर्दा उक्त कार्य मैले पढेको र बुझेको प्रकृया र तरिका भन्दा विपरित भएको हुदा कुरा उठाए कुरा र प्रश्नको उत्तर आएन विकल्प आयो मलाई उक्त प्रोजेक्टवाट नै हटाइए ।
मलाई त्यहि ठिक लागेको थियो कि त उक्त विपरित रहेको कुरा संचिनु पर्दथ्यो कि त त्यसरि गरिएको कार्यमा मेरो नाम इन्जिनियर भनेर चिनिन हुने थिएन, वास्तवमा त्यहि भयो ।
उनले भुकम्पले मात्र हैन अन्उ कुनै प्रकृतिक प्रकोपवाट वच्न प्रकृतिको संभावित चेनौतिलाई ख्याल गरेर निर्माण गरिनु प्रकृतिको नियम वा प्रकृतिक कानूनलाई स्विकार गर्नु हो भन्दौ प्रकृतिक प्रकोपको जस्ले वास्ता गर्दैन त्यसको न त ज्यानको सुरक्षा छ नत कुनै प्रकारको धनको नै । नेपाल कानूनले घर निर्माण सम्वन्धी वनाएका कानून पनि प्रकृतिको नियमलाई बुझ्दै प्रकृतिको नियले प्रकोपले घक्का मानिसमा नपुगोस भनेर नै हो ।
हकिले उनि अहिले जिउँदो इन्जिनियरको स्टिकर क्रान्ति अभियानमा छन । उनि पेशा र आम्दानिको स्रतको रुपमा मात्र पेशालाई बुझ्न नहुने भन्दै सवैलाइै चेतना जगाउने अभियानमा रहेका छन । उनले नेपाली घर भन्ने पुस्तक मार्फत निर्माणको समयमा गर्नुपर्ने र सतर्क हुनै पर्ने पक्षलाई सरल भाषामा समेत प्रकासित गरेका छन । उनको स्तिकर क्रान्तिको ज्ञान निम्न छ ।
“गुणस्तरयुक्त निर्माण गरिने तरिकाको स्टिकरहरु निर्माण स्थलमा टाँसौ र व्यवहत गरि कुशल भूकम्पसंग लडने र जित्ने निर्माणको परिचय देऔ, हरियो, रातो स्टिकरबाट बचौ र असल नेपाल आमाको सपूत बनौं….”
बालुवा के हो ? सिमेन्ट के हो, गिट्टी के हो ? पानी के हो ? डण्डी के हो ? मसला के हो ? कसरी बनाउने इत्यादि कुरोहरु प्रतेक नेपालीले जान्ने पर्ने दिन आएको छ । यी कुराहरु चाहे घर बनाउने, घर बनाउने सोच भएका मानिस वा आफु न बनाई अरुको लागि भलो गर्ने समाजसेवीहरुले पनि जान्नै पर्छ ।
स्टिकर नं. १ (फलामे डण्डी किन्दा याद राख्नुपर्ने कुराहरु)
१)सामान ल्याउनु भन्दा पहिले फलाम राख्ने ठाउँको चयन गर्नु होस् । फलाम राख्ने ठाउमा माटो, पानीले न छुने गरि व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।
२) फलामको पसल जहाँ फलामलाई व्यवस्थित ढगंले माटो पानीले नछुने गरि राखेको होस्, मतलव खिया नलागेको डन्डीमात्र खरिद गर्नुहोस ।
३) गुणस्तर चिन्ह् प्राप्त भएको डण्डी मात्र लिनु होस् ।
४) फलामको कम्पोजिसन तथा अन्य जानकारी वारे प्रमाणित कागजातहरु लिई राख्नुहोस् ।
५) फलामे डण्डीको सतह विग्रेको, तेलयुत्त सामन पोखेको, पेण्टहरु लागेको, खिया लागेको तथा अन्य चाहिएको गुणस्तर न भएको डण्डी न लिनुहोस् ।
६) सकेसम्म लामो डण्डी लिने साथै यो विचार गर्ने कि हामीलाई प्रयोग गर्ने ठाउँको अनुसार होस् जसले गर्दा टुक्रा कममात्रामा निसकियोस् ।
(इन्जिनियरिङ कानुन बनाउनको लागि)
स्टिकर नं.२ (सिमेन्ट किन्दा याद राख्ने कुराहरु)
१)विश्वास, भरपर्दो, पसल, एजेन्ट सके सोझै फैक्टरी बाट मात्र सिमेन्ट लिने बानी बसालौ किनभने सिमेन्ट रिफीलिगं नक्कली बोरा पनि बनाउने गरिन्छ ।
२) मैनुफैकचर (सिमेन्ट बनेको ) मिति न लेखेको सिमेन्ट न किन्नु होस् ।
३) सिमेन्टको च्यातिएको बोरा न लिनुहोस् ।
४) गुणस्तर चिन्ह जस्तै नेपाल गुणस्तर, भारतीय वा अन्य गुणस्तरको चिन्ह ९ ल्क्,क्ष्क्क्ष्,क्ष्क्इ ० भएको सिमेन्ट बोरामात्र प्रयोग गर्नुहोस् ।
५) पुरानो सिमेन्ट न लिनुहोस् किनभने सिमेन्टको शक्ति दिन प्रति दिन घटिरहेको हुुन जान्छ । तसर्थ सिमेन्ट कसतो गोदाममा राखेका छन् पनि विचार गर्नें र आफु पनि हवा न पसिने गरि, चिसो न लाग्ने किसिमले सिमेन्ट राखिने तथा यसको प्रयोग बढीमा एक महिना भित्र गरि हाल्ने ।
६) दवाको जस्तै कमपोजिसन लेख्न चलन हाम्रो सिमेन्टको बोरामा न भएकोले कम्पोजिसनको बारे फैक्टरी संग वा गुणस्तर चिन्ह दिने संस्था संग जानकारी लिई राख्ने ।
इन्जिनियर । अधिवक्ता दिनेश चौधरी युटुवमा हेर्नुहोस ।
स्टिकर नं. ३ (बालुवामा हुनु पर्ने गुणहरु : बालुवामा निम्न गणहरु हुनु पर्दछ ।)
१ं) बालुवा दानेदार हुनु पर्दछ । यसको साईज १÷१६ मि.मि. देखि २ मि.मि. सम्मको हुनु पर्दछ ।
२) बालुवा सफा हुनु पर्दछ । कुनै किसिमको आर्गेनिक झारपात, माटो हुनु हुँदैन ।
३) बालुवाका कणको आकार एगुंलर हुनु पर्दछ, गोलाकार वा अद्र्धगोलाकार हुनु हुँदैन् ।
४) कंक्रिटको लागि विभिन्न साईजका बालुवाको मिश्रिण हुनु पर्दछ यसले गर्दा सिमेन्ट कम लाग्ने गर्छ । एकै साईजका बालुवामा सिमेन्ट बढी लाग्दछ ।
स्टिकर नं. ४(गिटी, रोडा)
यहाँ सिमेन्ट कंक्रिटमा प्रयोग गरिने रोडा,गिटीको वारेमा चर्या गरि रहेको छु । यसका निम्न गुण भएको हुनु पर्दछ ।
१) यो ४.७५ मि.मि. देखि २० मि.मि. सम्मको हुनु पर्दछ ।
२) रोडा फोडेको हुनु पर्दछ ।३) रोडा ढुगां बलियो हुनु पर्दछ ।
४ ) एकै नास (साईज )को रोडा हुनु भएन् ।
५ ) एनगुलर आकारको गीटी (रोडा ) हुनु पर्दछ ।
स्टिकर नं. ५ (पानी )
पानीको विना सिमेन्ट मसला ,सिमेन्ट कंक्रिटिग बनाउनन सक्दैन । जसरी मानिस पानी को वेगैर बाच्न सक्दैन त्यसरी नै पानीको महत्व हो । पानीले के के काम गर्दो रहेछ हेरौ ।
१) यसले सिमेन्ट संग प्रतिक्रिया गर्दछ र बालुवा, गिटी संग मिलन सहयोग गर्दछ ।
२) चाहिएको भन्दा बढी पानीले सिमेन्टको शक्ति घटाउँछ । बढी पानी हवामा भएको तापले उडेर जान्छ र मसला भित्र प्वालै प्वाल बनाउँदछ जसले गर्दा कमजोर हुन जान्छ र चाहिएको शक्ति प्राप्त हँदैन ।
३) खराव पानीले पनि मसलालाई कमजोर पार्दछ । पिउने सफा पानीको प्रयोग गर्नु होस् ।
स्टिकर नं. ६ (मसला तैयारी गर्ने काम) :
सिमेन्ट मसाला बनाउँदा निम्न तरिका अपनाउने
हातले बनाउँदा ध्यान दिने कुराहरु :
१) पहिले बालुवा नापी एउटा सुख्खा तैयार गरिएको प्लेट फोर्ममा राखीने ।
२) चाहिएको सिमेन्ट बालुवामा राखिने ।
३) बालुवा र सिमेन्ट राम्ररी संग फेटिने ।
४) एक रंगको भएको बालुवा र सिमेन्ट मसालामा चाहिएको गीटी राखी पुनश्चः राम्ररी संग मिलाउने ।
५) अब वाटर सिमेन्ट अनुसारको पानी राखी मसलालाई राम्ररी संग मिलाउने । खास गरि ०.४ देखि ०.६सम्मको वाटर सिमेन्ट प्रयोग गरिन्छ ।
मेसिनबाट बनाउँदा निम्न कुरो ध्यान दिने ।
१) मेसिनको बकेट (सामान राखिने भाडो )मा पहीले गिटी राखिने ।
२) गीटी माथी चाहिएको बालुवा राखिने ।
३) बालुवा माथि चाहिएको सिमेन्ट हालिने ।
४) अब पानी न हालिकन सुख्खा अवस्थामा रहेका मसलालाई राम्ररी संग फेटिने । याद रहोस गीटीले बेल्चाको मात्र काम गर्छ, यसले बालुवा र सिमेन्टलाई राम्ररी एक रगंको अवस्था आउनेजेल सम्म फेटनु पर्दछ ।
५) अब वाटर सिमेन्टमा दिएको पानी अनुसार पानी राखी फेरी फेटी मसलालाई तैयार गर्नु पर्दछ ।
स्टिकर नं. ७(सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुराहरु)
(१) कहिले पनि Over reinforced design नगर्नुहोस्, सके Balanced नसके Under reinforced design गर्नुहोस् ।
Over reinforced design को मतलब हुन्छ चाहिएकोभन्दा बढी डण्डीको मात्रा प्रयोग गर्नु । Balanced reinforced design को मतलब हुन्छ चाहिएको ठीक डण्डीको मात्रा प्रयोग गर्नु । Under reinforced design को मतलब हुन्छ चाहिएकोभन्दा कम डण्डीको मात्रा प्रयोग गर्नु । जसरी हामीले कम खाना खाए केही हुँदैन, ठीक खाना खाए राम्रो हुन्छ तर बढी खाना खायो भने एक्कासि मर्न सक्छौं । त्यसैगरी कम डण्डीको प्रयोग ग-यो भने भवनमा दरार परी पहिले हामीलाई संकेत दिन्छ, ठीक डण्डीको प्रयोग भयो भने राम्रो तर बढी डण्डीको प्रयोग भयो भने एक्कासि थाहा नै नदिईकन भवनको स्ट्रक्चर भाँचिन सक्छ ।
(२) ठीक स्थानमा डण्डी राख्नुहोस् ।
(३) ठीक तरिकाले डण्डीहरुलाई overlapping, development length भिलनतज गरि राख्नुहोस् ।
(४) ठीक सफा गरी डण्डी राख्नुहोस् ।
(५) ठीक साईज, आकार र गुणस्तरको डण्डी राख्नुहोस् ।
(६) ठीक साईज, आकार र गुणस्तरको बालुवा, गिट्टी, सिमेन्ट, पानीको प्रयोग गरी ढलानको मसाला बनाउनुहोस् ।
(७) सिमेन्ट मसाला बनाउँदा सुक्खा अवस्थामा फिटेर पछि पानी राखी पुनः फिटी प्रयोग गर्नुहोस् । आधा घन्टादेखि बढीमा एक घन्टाभित्र खपत हुने परिमाणमा मात्र मसाला बनाउनु होस् । एकैपटक दिनभरिको लागि मसाला तयार गर्ने चलन हटाउनु होस् ।
(८) ठीक ढंगले कम्प्याक्सन गर्नुहोस् ।
(९) ठीक ढंगले पानी पटाउने कार्य गर्नुहोस् ।
(१०) ठीक वातावरणको व्यवस्था गरी मात्र ढलान कार्य गर्नुहोस् ।
(११) फर्मा विस्तारै समय पुगे पछि मात्र खोल्नु होस् ।
(१२) बीचमा रहेका टाई बीममुनि पर्खाल जोड्ने चलनलाई हटाई पर्खालको साटो माटो पुर्ने गरी लाखौं रुपैयाँको बचत गर्ने बानी बसाल्नुहोस् ।
यी माथीका तथा अन्य स्टिकरमय कुराहरु जान्न, सहयोगको लागि इ. दिनेश चौधरी द्वारा लिखित “इन्जिनियरिङ क्रान्तिको मोडमा नेपाली घर” नामक पुस्तक अझ सहयोगि हुनेछ ।